Ramadaana 17 fi Injifannoo lola Badri. | NuuralHudaa
slaamummaa keessatti baatiin Ramadaana baatiiwwan biroo caalaa Muslimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kana keessa dalagaawwan gaggaariin Rabbiin biratti dachaa dachaan hisaabamu, baatii araramaa, kan araarama itti argatan, kan ibidda jala bilisa itti bahaniidha. Akkasumas baatii injifannooti. Baatii kana keessa seenaa Islaamaa keessatti Injifannoowwan gurguddoon addunyaa kana jijjiiran hedduun galama’aanii jiru.
Ibsaa Abdulhayyii says:
Seenaa hedduu nama barsiisu jzkl Rabbiin isin irraa haa jaalatuu Yeroo tokko jihaada filmii seenaa saabotaa fa nuuf dabarsaa.?
Seenaa hedduu nama barsiisu jzkl Rabbiin isin irraa haa jaalatuu Yeroo tokko jihaada filmii seenaa saabotaa fa nuuf dabarsaa.
Ibsaa Abdelhayyii says:
yeroo tokko tokko jechuu kiyya
Molaa Teha says:
Seena Hedduu Nama boonsu Jzkl
Muaz nurahmed says:
masha allah jzk kabirallee itti nuuf dabala obboleeyyan isin jaalanna
Masha Allah jzk Rabbiin issn ha jalatu jazan keessan jeenata ha tau
Ridwan Hasen says:
yaadni Keenya hundaa nu keeysaa haasawaa jiraniif galatoomaa.
hubad Amiin says:
as wr wb mashallah ergawwaan heeddu gaarii taatee tan biyyaa keessa fi biyya alatis nu gahan jirtaan jzk kuluu khyeeran barakalaa fiikum
Toltuu dalagdu sumaafi. Hamtuu dalagdus sumatti deebiti.